- အာရုံခြောက်ပါးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်တွေဟာ မိမိစိတ်ထဲကို အဆက်မပြတ် ၀င်နေတတ်တဲ့ စိတ်သဘာဝရဲ့ သဘောကို မသိတော့၊ ၀င်လာသမျှစိတ်ရဲ့ ထိတွေ့မှုအပေါ်မှာ ခံစားတဲ့စိတ်တွေ အမျိုးမျိုးဖြစ်လာတယ်။ ခံစားမှုမျိုးစုံအပေါ်မှာ ဖြစ်ချင်မှုတွေက လိုက်ဖြစ်ပေးနေရတယ်။ အဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲနေတဲ့ ခံစားမှု၊ ဖြစ်ချင်မှုတွေကို အမှီမလိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာ ဟိုခံစားမှုကို လိုချင်လိုက်၊ ဒီဖြစ်ချင်မှုကို ခံစားလိုက်နဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ မြန်ပြီး များနေတဲ့ စိတ်အနေအထား။
- မူလပုံစံကို ပြန်ဖော်လို့မရအောင် ပုံပျက်ပန်းပျက်အဆင့်ထိ ပျက်စီးသွားပြီဆိုတာကို သိသာထင်ရှားစေတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ ဖြည့်စွက်ဖော်ပြတဲ့ စိတ်အနေအထား။ (ပျက်စီးနေတဲ့ စိတ်အခြေအနေဟာ စိုးရိမ်ရေမှတ်ကျော်နေတဲ့ စိတ်အဆင့်။)
- စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်သိမှတ်တဲ့ စိတ်အလုပ်သဘောကို လေ့ကျင့်ရင်း ဖြတ်တောက်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ စိတ်အလုပ်။ (ဥပမာ - မျက်နှာသစ်တဲ့အချိန်မှာ မျက်နှာသစ်ခြင်းကိစ္စကို အစကနေအဆုံးထိ လိုက်သိတယ်။ မျက်နှာသစ်ပြီးတာနဲ့ မျက်နှာသစ်တုန်းက သိခဲ့တာတွေ အကုန်လုံး အပြတ်ရှင်းထုတ်လိုက်တယ်။ ထမင်းစားခန်းရောက်တဲ့အခါမှာ ရောက်ရှိတဲ့အချိန် လုပ်နေဆဲ အလုပ်ပေါ်မှာ စိတ်ကိုထားထားတဲ့ စိတ်အလုပ်ကို ဆက်လုပ်ပြီး သိမှတ်ခဲ့တာတွေ အကုန်လုံး ဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဘယ်နေရာရောက်ရောက်၊ ဘာပဲလုပ်နေလုပ်နေ၊ သိနေတဲ့သိမှတ်မှုက ဖြစ်ပြီးခဲ့သမျှ အရာအားလုံးကို လက်ကျန်မရှိအောင် အပြတ်ရှင်းပြီးသား ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်အနေအထား။)
အပြန်ပြန် အလှန်လှန် သုံးသပ်သောစိတ်
- စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်သိမှတ်လို့ သိခဲ့ရသမျှ အသိတွေဟာ သိပုံသိနည်း စည်းကမ်းအတိုင်း ဟုတ်ရဲ့လား? သိတယ်ဆိုတဲ့ အသိကရော တကယ် ကိုယ်တွေ့သိမြင်လိုက်တဲ့ အသိဟုတ်ရဲ့လား? သိကြည့်ရတာ နက်နဲလွန်းလို့ သိကြည့်ရင်း ခက်ခဲလာတာနဲ့ ဒီလိုပဲ ဖြစ်မှာပါလို့ မိမိသဘောနဲ့ မိမိ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး ဟိုလိုလို ဒီလိုလို သိသလိုလို လုပ်လိုက်တာလား? သိကြည့်နေရင်းနဲ့ အရင်က သဘောမပေါက်ခဲ့တဲ့ စေတသိက်တွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်အစစ်ကို တွေ့ပြီး ဒီလိုပါလားလို့ ဆက်စပ် အဖြေထုတ်ကြည့်နေတာလား?
စိတ်အလုပ်ကို စိတ်တိုင်းကျ အားထုတ်ပြီးလို့ ခဏနားနေတဲ့အချိန်မှာ မိမိရဲ့စိတ်အလုပ်ကို ပြန်စစ်ဆေးပြီး သုံးသပ်ကြည့်တဲ့စိတ်။
- တစ်ချီတည်းနဲ့ သူဋ္ဌေးဖြစ်ရေးကိစ္စအတွက် စနစ်တကျ အကြိမ်ကြိမ်လေ့လာပြီး သေချာပြီဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးရတာနဲ့ အပိုင်လှုပ်ရှားဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲနေတဲ့စိတ်။
- ကိစ္စတစ်ခုကို ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းနေတယ်ဆိုပေမယ့် မိမိဘက်က ပြောရေးဆိုခွင့်မရတဲ့ အနေအထားအပေါ်မှာ မကျေမနပ် ဖြစ်နေတဲ့စိတ်။